Fiadidiana ny Repoblika: tsy hisy fanamboarana ny governemanta | NewsMada
Nitondra fanazavana mikasika ireo raharaha manitikitika ny sain’ny mpanara-baovao ny Fiadidiana ny Repoblika. Tsy hisy aloha ny fandravana na fanovana ny governemanta. Hiatrika ny drafitra ho fanandratana an’i Madagasikara ihany koa izao…
“Mbola ao anatin’ny programa fohy ezaka ny filohan’ny Repoblika, amin’izao fotoana izao, ny amin’ny fanovana governemanta. Noho izany, tsy hisy ny fanamboarana ny governemanta amin’ity volana janoary ity, araka ny resaka mandeha.” Io no nambaran’ny talen’ny kabinetran’ny fiadidiana ny Repoblika, Ranoromaro Lova Hasinirina, tamin’ny fihaonana voalohany tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny lapan’Iavoloha, omaly. Noho ny fahasahiranana teto amin’ny firenena tamin’ny fandalovana ny valanaretina covid-19.
Amin’ny lafiny politika, hitantsika fa manomboka mahazo vahana ny fanakorontanana amin’ny lafiny rehetra. Nisafidy sy mifantoka amin’ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana sy ny hanao ho laharam-pahamehana amin’ny fanaovana fotodrafitrasa amin’ny fijerena indrindra ny sosialam-bahaoka ny fitondram-panjakana.
Ho tonga amin’ny 22 janoary ny vary 550 Ar ny kapoaka
“Efa manao ny ezaka rehetra ny minisiteran’ny Varotra sy ny indostria amin’ny fitadiavana vahaolana amin’ny vary”, hoy izy. Araka ny toromariky ny filohan’ny Repopblika, ho avy amin’ny 22 janoary izao ny vary 7 000 taonina nohafaran’ny fitondram-panjakana. Misy hatrany mpanararaotra ka hohamafisina ny ady amin’izy ireny. Hamidy 550 Ar ny kapoaka amin’io vary io.
Tsy hanana indrafo ny “Raharaha volemana 73,5 kilao”
Momba ny “Raharaha volemana 73,5 kilao”, izay mibahana eo amin’ny tontolon’ny serasera. Anisan’ny velirano nataon’ny filohan’ny Repoblika ny ady amin’ny kolikoly sy ny fanondranana an-tsokosoko harem-pirenena. Noho izany, tsy misy indrafo ho an’izay tratra manao an’izany. Efa na nanome toromarika ny filohan’ny Repoblika ny anenjehana izay rehetra voarohirohy amin’io raharaha io, na tompon’andraikitra ambony aza.Tsy ny fanjakana malagasy no nangataka vonjimaika an’ireo olona telo voatana any ny Afrika Atsimo, izay nolavin’ny fitsarana any an-toerana. Manohy ny asany an-kalalahana ny mpanao fanadihadiana.
Tsy hisy fiverenana amin’ny fihibohana
Manoloana ny fiakaran’ny tahan’ny olona mitondra tsimokaretina amin’ny faritra sasany: raha mitaha amin’ny any ivelany i Madagasikara, amin’izao fotoana izao, anisan’ny firenena atahorana. Hatramin’izao, diso tanteraka ary tsy mitombina ny filazana fa hiverina amin’ny fihibohana isika. Fanelezana vaovao tsy marina izany.
Matoky ny fahatongavan-tsain’ny tsirairay: ezahina ny hanajana ny fepetra ara-pahasalamana efa nipetra hatramin’izay. Izay no ahazoana misoroka ny andininy faharoa amin’ny fihanaky ny covid-19. Mba manatona tobim-pahasalamana eo ho eo izay ahitana soritr’aretina, ezahina ny tsy hamoriana olona be loatra… Izay no ahazoana miaina an-kalalahana eto Madagasikara.
Nasian-teny koa ny amin’ny famatsian-drano, ny fanomboaran-dalàna, ny fanorenana tanàna vaovao eny Imerintsiatosika… Ho isam-bolana ny fihaonana amin’ny mpanao gazety.